Huawei dib uma dhigin bilawga Mate X | Androidsis
Maya, Huawei dib uma dhigin bilawga Mate X
Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in shirkadda Huawei ay dib u dhigtay soo saarista taleefanka casriga ah ee laabmaya Mate X ilaa Sebtember, laakiin khubarada ayaa shaaca ka qaaday in tani aysan run ahayn.
Xanta ku saabsan dib u dhigista Mate X ayaa soo kici kartay sababo la xiriira dhibaatooyinka Samsung Galaxy Fold, waxaa laga yaabaa inay tahay hab lagu sii tijaabiyo qalabka ka hor inta aan la bilaabin. Si kastaba ha noqotee, khubarada ayaa shaaca ka qaaday in Huawei uu ku dheganaan doono jadwalka soo bandhigida.
Mate X waa taleefankii ugu horreeyay ee la laaban karo ee Huawei oo lagu shaaciyo dhacdo ka hor MWC 2019 oo ka dhacday magaalada Barcelona. Qalabku, wuxuu ka duwan yahay kan la tartamaya, Fold Galaxy, dib ayuu u laaban yahay halkii uu ka noqon lahaa gudaha. Markii la bilaabay, Huawei, taas oo dhaleeceeyay naqshadda mobilka Kuuriyada Koonfureed, ayaa yidhi boosteejada ayaa la heli doonaa si loo iibsado bartamaha sanadka.
Samsung Galaxy Fold iyo Huawei Mate X
Horaantii bishaan, mobilada ayaa ku taxanaa dukaanka rasmiga ah ee qadka tooska ah waxaana liiska lagu muujiyay taasi waxaa la heli doonaa bisha june. Samsung, dhanka kale, waxay horeyba ugu dirtay cutubyo dib u eegis ah rajadooda shabakadaha YouTubers iyo baloogyada tiknoolajiyada. Si kastaba ha noqotee, hal maalin uun ka dib isticmaalka, waxaa jiray warbixino sheegaya shaashado waxyeelo soo gaadhay.
Mate X wuxuu leeyahay shaashad ballaaran oo 8-inji ah oo jajaban oo leh FullHD + xallinta 2,480 x 2,200. Waxay ku duuban tahay taleefan leh shaashad dhan 6.6-inji dhinac ah iyo dhinaca kale oo ah 6.38-inji shaashad. Waxaa ku shaqeeya Kirin 980, kaas oo lagu daray 8GB oo RAM ah iyo 512GB oo ah kaydinta la ballaarin karo.
Naqshadeynta darteed, kaamirooyinka gadaal ee seddexaad ee Mate X (40 MP + 16 MP + 8 MP) sidoo kale waxay u shaqeeyaan sidii kamaradaha hore. Qalabka wuxuu leeyahay Balong 5000 modem gudaha, taas oo macnaheedu yahay taas waxay taageertaa shabakadaha 5G. Waxa kale oo ku jira batari awooddiisu dhan tahay 4,500 mAh oo leh taageero loogu talagalay teknoolojiyada degdegga ah ee degdegga ah ee 55 W
Galaxy Fold vs Huawei Mate X: laba fikradood oo kala duwan oo isku ujeedo ah
Huawei ayaa dhigay a qiimaha qiimaha ee 2,299 euro (~ $ 2,607 qiyaastii) oo ku saabsan Mate X. Waxay si rasmi ah ugu jiri doontaa dukaamada dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Maya, Huawei dib uma dhigin bilawga Mate X
Redmi Pro 2 oo leh Snapdragon 855 wuxuu lahaan doonaa isku xirnaanta NFC, sida uu sheegayo Lu Weibing
Dib u eeg Xiaomi Redmi Xusuusin 7